Fitsidihana ny bilaogy Libyana: Maty ve ny teny Arabo? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 24 Aogositra 2018 13:00 GMT
Matetika ny bilaogera Libyana miresaka lohahevitra samihafa sy isan-karazany – na resadresaka tsotra izany na tsia. Niteraka adihevitra momba ny antsoina hoe “fahafatesan'ny” teny Arabo ny lahatsoratra iray vao haingana lazaina fa tsotra navoakan'i Lebeeya izay nanoritsoritany ny fomba nitiavan'ireo mpiara-miasa taminy ny mofomamy sôkôlà nataony sy niarahaba azy tamin'ny alàlan'ny fikasihana hazo mba hialana amin'ny ‘maso ratsy’.
Nanomboka izany rehetra izany raha niteny i Lebeeya hoe: “LAZAO HOE” Mashallah” ry vahoaka …. ATSAHARO ny milaza hoe” KASIHO NY HAZO”, fa ataovy hoe mashallah.” (Ny fehezanteny arabo ma sha`a allah dia manondro ny fankatoavana izay nobinaikon'Andriamanitra eo amin'ny vintana tsara na ratsy izay mety hihatra amin'ny mpino). Maneho hevitra ilay bilaogera Suliman hoe:
Mani kosa nandray ny fanapahan-kevitra hamolavola bebe kokoa ao amin'ny bilaoginy manokana ary hiaro ny “fiainana” amin'ny teny Arabo sy teny hafa.